संसारका यी चार देश, जहाँ पुलिससँग ह’तियार हुँदैन, तर पनि छैन अपराध, खुसि छन् यहाँका जनता - Kohalpur Trends
यस्तो कार्यका लागि स्वभावतः पुलिसलाई ह’तियार चाहिन्छ । शान्ति सुरक्षा कमजोर भएका देशहरुमा पुलिसहरु ह’तियारले सुसज्जित भएर गस्तीमा निस्कन्छन् ता कि अपराधीहरु तर्सियुन् । तर यो दुनियाँमा यस्ता केही देशहरु पनि छन् जहाँ पुलिससँग ह’तियार हुँदैन ।
शान्ति सुरक्षमा खटिने अधिकांश पुलिसहरु निहत्था भएता पनि ती देशहरुको शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै उदाहरणीय रहँदै आएको छ । अधिकांश पुलिससँग ह’तियार नहुने दुनियाँका केही देश यी हुन् :
१. आइसल्याण्ड : करिब ३ लाख जनसंख्या भएको युरोपेली मुलुक आइसल्याण्डको एउटा अनौठो विशेषता यो छ कि यहाँका करिब एक तिहाइँ जनतासँग ह’तियार हुन्छ । एकातर्फ नागरिकहरु ह’तियारधारी हुन्छन् भने अर्कोतर्फ अधिकांस समय पुलिसहरु विना हात ह’तियार सुरक्षा कार्यमा खटिएका हुन्छन् । आइसल्याण्डमा अपराधको दर निकै कम छ । नागरिकहरुसँग भएको ह’तियार पनि केवल जनावरको वैध सिकारका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ ।
२. आयरल्याण्ड : अर्को युरोपेली मुलुक आयरल्याण्डका केवल २५-३० प्रतिशत पुलिस अधिकारीहरुले मात्र ब’न्दुक बोक्दछन् । ७५ प्रतिशत पुलिसले त ब’न्दुक चलाउने तालिम नै लिएका हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरुले ब’न्दुक बोक्ने कुरै भएन ।
३. न्युजिल्याण्ड : दुनियाँको सम्वृद्ध तथा शान्त मुलुकमध्येको एक न्युजिल्याण्डमा पनि केवल एक दर्जन पुलिस अधिकारीहरुसँग मात्र ह्या’ण्डग’न हुन्छ । अरु पुलिसहरुले निजी ह’तियार राख्दैनन् ।
४. नर्वे : विश्वको सबैभन्दा सुखी मुलुक मध्येको एक नर्वेमा पनि पुलिसले खासै ह’तियार बोक्दैनन् । अ’पराधीलाई तर्साउनका लागि पुलिसले ह’तियार बोक्दा जनतालाई उल्टै नकारात्मक त्रास पैदा हुने मान्यता छ त्यहाँ ।
सन् २०११ मा नर्वेमा एकजना ह’तियारधारीले गो ‘ली चलाउँदा ७७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला पनि पुलिसले ढिलोमात्र एक्सन लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एजेन्सी
Previous Previous post: घरमैं स्वास्थ्य सामाग्री पुर्याउँदै स्थानीय सरकार
Next Next post: उपत्यकाको निषेधाज्ञा २९ गतेसम्म लम्बियो, पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने